We She Me: မောင်းပြန် တံခါး ယဉ်ကျေးမှု
| FLAGS: Me , Singapore
TMH - 7/28/07, 3:26 AM
Oh yeah. that's true. Here in Canada also has those kind of doors you mentioned. Yes mostly somebody who opens door hold it longer till ppl behind you pass it over especially at the door divided the subway exit and the shopping center. So like lot of ppl behind you. Well, I agree that to say thanks to that holder, it's part of beautiful manner.
Andy Myint - 7/28/07, 4:17 AM
Right.... that's lovely and easy to make gesture.
sawphonelu - 7/28/07, 12:48 PM
ဒါကိုက အာရှ တန်ဘိုး ဖြစ်ပေတော့ သ ကိုး လို့ ပြောရ မှာ ပါ ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွေ နောက်ကို လိုက်လွန်းရင် နောက်ဆိုရင် ယဉ်ကျေးအောင် အနောက်ကနေ ပြန်သင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ .. ပျူ စာ ကို ဘယ်သူ အရင်ဖတ်တတ်သလဲ။ ဗမာ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတွေ ကို ဘယ်သူတွေ စပြီး ထိန်းသိမ်း ခဲ့ သလဲ။
Andy Myint - 7/29/07, 1:31 AM
ကောင်းတာဆို အကုန်ယူမယ်ဆိုရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှ မဟုတ်ပါဘူး.. ကိုယ့်အတွက် ကောင်းတာ အကုန်ပေါ့။
Anonymous - 7/29/07, 2:32 AM
ဒီကိစ္စက culture နဲ့ ဆိုင်မလားပဲ ။ အနောက်တိုင်းသမားတော်၂များ၂ဟာ အဲလိုနေရာတွေမှာ ပွင့်လင်းတတ်ကြပြီး ၊ တခါတလေ အပေါ်ယံ များတာလည်း တွေ့ ဖူးတယ် ။
အရှေ့တိုင်းသားတွေကတော့ ရှက်တာရော.. စလုံးအသုံးနဲ့ဆို (cant be bothered) ဆိုတာရော တွေကြောင့် အဲလိုတွေ ဖြစ်နေတာ ။
MRT စီးရင် ဘယ်ဘက်ကပ်ဖို့ ၀န်လေးနေကြတာလေ ။ အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ ။
ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်သာ လုပ်ပေးလိုက်ပါ ကိုအင်ဒီရေး)
Thyda - 7/29/07, 5:01 AM
Andy Myint - 7/29/07, 1:10 PM
မှန်ပါတယ်... အာရှမှာ အတိုးတက်ဆုံး နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယားမှာ ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှုတွေ အခိုင်အမာ ရှိပြီး ယနေ့တိုင် လူငယ်တွေက စပြီး ကျင့်သုံးနေတုန်းပါပဲ။ ဒါဟာ အတုယူစရာပါ။ (ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီ နှစ်နိုင်ငံကို ရေးတဲ့ထဲမှာ တမင်တကာ ချန်လှပ်ထားခဲ့တာပါ။)
မဂျစ်တူး ပြောတာလည်း အမှန်ပါပဲ။ ဘိုတွေက အပေါ်ယံများပြီး British တွေဆို တဆိတ်ပိုလွန်းတယ် ထင်ပါတယ်။
MRT ကတော့ မြန်မာပြည်က ဘက်စ်ကားနဲ့ စာရင် အများကြီး တော်သေးတော့ သည်းခံနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ အထဲမတိုးဝင်ရင် မြန်မာပြည်က ဘက်စ်ကား စပယ်ယာ (Conductor) တွေကို ခေါ်ပြီး ဆုံးမပေးချင်တဲ့ စိတ်လေးပဲ နည်းနည်း ပေါက်လာပါတယ်။ (မြန်မာပြည်က ဘက်စ်ကားတွေ အကြောင်း မဂျစ်တူးတော့ သိချင်မှ သိမှာပါ)။ ရထားကလည်း နောက် ၃-၄ မိနစ်ဆို နောက်တစ်စင်း လာမှာဆိုတော့ စောင့်စီး လိုက်ပါတယ်။
Anonymous - 8/22/07, 12:44 AM
now that u mentioned it.
sometimes the reply for Thanks is welcome, sometimes its no problem, sometimes its sure.
can u pls explain when to use what?
Andy Myint - 8/24/07, 1:12 AM
I casually or swiftly reply “sure” for minor help but seldom to superiors and clients while I often say “U r welcome” rather formally or decently in most cases...
Anonymous - 2/13/09, 11:24 AM
The earlest civilization started from asia but we asians r still rude.I have been to many asian airports.All r rude except japan airport.Must Know our self.
Ko Paw - 2/13/09, 8:25 PM
ဟားဟား…. ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရင်း “ဘ၀အိပ်မက် ပန်းအိပ်မက်” ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကွက်ကလေးကို ပြေးမြင်တယ်။
လူပျိုကြီး ကံကောင်း ဘတ်စ်ကားပေါ်က အဆင်းမှာ လူတယောက်ကို အရှိန်နဲ့ ၀င်တိုက်မိတယ်။ အဲသည်မှာ “ဆောရီး” လို့ပြောရမယ့်အစား “သိုင့်ခ်ယူ၊ သိုင့်ခ်ယူ” လို့ ပြောသွားတဲ့ အကွက်ကလေး။
ကိုအင်ဒီရဲ့…. Sure က တော်ပါသေးတယ်။